Icebiso: Njani ndiya kuhlangana abantu. Intlanganiso abantu xa nisolko conflicted kwaye avoiding a ezinzima budlelwane - Baggage Ukubuyisa kunye Natalie Lue
Icebiso: Njani ndiya kuhlangana abantu. Intlanganiso abantu xa nisolko conflicted kwaye avoiding a ezinzima budlelwane – Baggage Ukubuyisa kunye Natalie Lue
Lately mna ve sele ekubeni abanye doubts malunga apho kuhlangana abantu ngenxa yokuba ndiza ukudinwa ka-uncwadi. Bonke guys kukho nje ufuna a ngobunye ubusuku kuma, kwaye ixesha elininzi zibu ka-antonio ngoko ke, ukuba ayikho elihle ndifuna ngakumbi mhlawumbi ezinzima budlelwane kodwa a guy uyakwazi umhla a ezimbalwa phinda-phinda kwaye kuba okulungileyo ixesha kunye andikho ngenene mdala ngokwaneleyo ukuba baguqukele a dating iwebhusayithi kwaye andifuni t bazive lonely sizathu andifuni t kuba guy kunjalo ngoku. NML uthi: trouble kukuba ufuna kwi-ingxabano. Uthi ufuna ukuya kuhlangana guys ukuba aren t nje uzama ukufumana kweyakho knickers, kodwa wena musa t ufuna a ezinzima budlelwane, kwaye ideally ufuna umntu uyakwazi hamba kwaye kuba ezimbalwa imihla kunye. Iphezulu le ufuna kuye ku-kuziphatha na umntu olilungu ekubeni fun kodwa hayi kakhulu kakhulu fun. Lento kutheni ufuna struggling kuba ufuna kakhulu kakhulu ngaphandle into kuwe kuthi ukuba ufuna abancinane ngaphezu kwemihla emibini ngaphandle. Dating ufumana kunzima, kodwa yayo s made harder nge yokuba kukho ilanlekile abantu ngaphandle apho dating abo musa t yazi into yokuba ufuna kwaye ingaba conflicted. Oku ithumela ngaphandle mixed imiyalezo kwaye ezinye idibanisa ukuba ezininzi abantu ehamba jikelele njenge headless aso kwi-dating ihlabathi. Inika ngaba ithuba get ukwazi umntu isigqibo sokuba ngaba yayo s into ofuna ukuthatha elandelayo inqanaba. Akukho umthetho ukuba ithi awunokwazi umhla ukuba wena musa t ufuna into ezinzima, nangona kunjalo, oku ingaba alter loluphi uhlobo dating amava uza kuba. Iphezulu le, uza inadvertently kukhokela abanye guys phezulu igadi indlela ukuba ufaka unclear malunga into ofuna. Olandelayo nto uyayazi nguye ukucinga ufuna ngokwenene njengaye kwaye ukuba ungakwazi kuba into ethile njengoko ugqibile emva kwemihla emibini.
Xa uvula jikelele kwaye uthi ufuna kuthatyathwa ngaphandle, kuba ezimbalwa imihla, kwaye fun, baya ll siphathe nawe ngokufanelekileyo. Jikelele necala decent guy, lowo ll yenza nje lonto kodwa jikelele i-avareji guy ukuba uyayiva umfazi uthi yena nje ifuna fun, lowo ll kuva ukuba njengoko yena ngu phezulu kuba shag kwaye ithuba ingalo yakhe. Inxalenye kum uziva ngathi usasebenzisa ukuba nkqu nokuba kungenxa annoying xa guys ingaba ngathi ayixhasi namnye ufuna ukufumana phandle umbala wakho knickers ngaphezu kokuba ufuna ukwazi kuni, ukuba bonke ufuna kukuba abanye fun kwaye ezimbalwa imihla, aba ngabo kanye mhlawumbi zakho zilungile candidates. Isixa-mali legwork kuwe wafakwa ingxowa-abantu kufuneka proportionate ukuba uhlobo dating amava ufuna. Ukuba nonke nina genuinely ufuna ukuba ingaba abanye fun kwi ezimbalwa imihla, mna wouldn t go ukuguqula nedolophu phantsi phezulu ikhangela enokwenzeka suitors. Mna nento yokuba kuthabatha chances kunye guys kuhlangana nawe ngaphandle socially. Kodwa kufuneka yenze isigqibo into ofuna. Ukuba ufuna musa t ufuna into ezinzima, oko kukuthi kakuhle. Kuphuma, bonwabele ngokwakho, kwaye nje kuba luqwalasela behamba ukusuka omnye kubekho inkqubela malunga town enjoying herself kwaye avoiding into ezinzima, omnye kubekho inkqubela malunga town ngubani avoiding nokuzinikela. Kuya kwenzeka ntoni lonke ixesha kwaye uyakwazi kuwela abanye ngenene engalunganga uthando imikhuba ngaphandle kokuba uhlawule vala ingqalelo ukuba ingaba ufuna ukulawula yakho omnye ubomi kwaye kangakanani kuwe vumelani ngokwakho get ngokulinganayo! okanye ezichaphazelekayo yi-guys kufuneka ahlangane. Le ndawo ayikho rhoqo a kubonisa uhlobo guy uza kuhlangana, kodwa njengokuba umthetho ka-koobhontsi, ukuba wena musa t na uhlobo amadoda kuni kwakhona intlanganiso kwi iindawo apho sihamba, tshintsha iindawo. Uphephe uzama ukuhlangabezana abantu emsebenzini ngenxa yokuba ndiya kuba ngokwaneleyo amava ngokwam nabanye abafundi ukwazi ukuba ufuna ngokwenene shouldn t pee kwi eyakho doorstep. Isantya dating kwaye icacile imisebenzi ingaba fun kwaye unako kukunika ekhawulezayo ulungise ka-indoda efuna ingqwalasela. Lumka wayecinga yokufumana kwi-rut ngezi kangangoko banako ukwenza kuni overtly picky kwaye okanye ufuna ukufumana hooked kwi-ukuqokelela ingqalelo. Intlanganiso ngeenkqubo imisebenzi nezinto endinomdla kuzo soloko elungileyo omnye njengoko uza sele share ngokufanayo emhlabeni, nangona kunjalo oku kubalulekile ngakumbi xa nisolko ikhangela a enokwenzeka iqabane lakho. Unguye galleries, scavengername hunts, iwayini kokungcamla, i-ngokuhlwa kunjalo, gym (nangona khumbula oko kungenzeka awkward emva koko), DIY evenkileni (jonga helpless nge chainsaw okanye into kwi-i-aisle apho kukho ilanlekile babantu, ehamba jikelele), ukuboleka a dog ukuba wena musa t isinye kwaye kuya kuba wahamba kuzo park, okanye emidlalo. Andinguye omkhulu fan ka-intanethi dating enoba ubudala, ngokulula ngenxa yokuba oko sele ngakumbi liars kwaye abantu pretending abo. kanye xa sukuba ngenene kuba girlfriend okanye umfazi, ngoko ke uphumelele ayikwazi kufumana kum uboniso ndlela kwakho ngaloo icala. I-namanani kuwe ngu ngokwenza loo sangokuhlwa umhla izinto ezilungileyo ukutya, iwayini, kwaye iqela labantu abakhoyo sifuna gel neqabane lakho personality.
Icebiso lam ngaba nangona ngu ukubona yintoni impendula xa sidibanise into ofuna. Ufuna ukulawula yakho okulindelweyo ngokufanelekileyo ngenxa ukuba ngubani ofuna ngu fun, ngoko ke worrying malunga ntoni ezi guys ndifuna ukusuka kwi nani yi inkunkuma amandla. Nje ngenxa a guy ifuna i-one-busuku kuma, akuthethi t zithetha abe efumana omnye. Kuphuma kwaye wonwabe kwaye ulumkele ka-ilindele abantu kuziphatha njenge enokwenzeka boyfriends xa sukuba. engathndwayo ukubakho jikelele ngaphaya a ngowesithathu umhla. Mna uyakwazi ukubona apho umbhali ngu esiza ukusuka. Ngesiqhelo xa ufuna kwakhona omnye, u musa t ufuna ukuchitha mgqibelo busuku kuphela ekhaya, kwaye ufuna ezinye loluntu ndibano kwaye idla, ayo s iindawo njenge uncwadi apho kuwe ll khona. Baya kudlala okulungileyo umculo kwaye kuba mnandi izicwangciso, kodwa ndiyacinga ukuba iqhosha nto ayiyo ukuba ulindele ukuba ahlangane zakho zilungile iqabane lakho apho, kodwa nje relax, kuba okulungileyo ixesha kunye nabahlobo, kwaye ukuba wenza kuhlangana nabani na umdla, kulungile, ukuba nje a ibhonasi. Wam amava, ndine kanti ukuhlangabezana nabani na ngokwenene fantastic, kodwa ndithe ndaba nabahlobo bakho abo zahlangana zabo partners ngexesha lokutya kwaye umculo ingxelo. Ngu enika umdla isihloko apho. Ndicinga ukuba inani esinye isizathu kutheni sino trouble ingxowa-okulungileyo guys ukuba umhla okanye vumelani yedwa yokufumana imihla ubizwa ngokuba siya kugxininisa kakhulu kakhulu ixesha ingqalelo kuyo. Ke phantse njenge desperation kwaye guys unako evakalayo oku imayile kude. Mangaphi amaxesha kuba thina weva stories abantu ukufumana omkhulu partners xa babeza ubuncinane ilindele ngayo? Abaninzi couples onayo kunye, xa babeza wafunga ngaphandle i-opposite sex. Ndiyacinga ukuba eyona nto ukwenza xa awutshatanga kukuba kugxila ngokwakho. Sifunise ukuba kutheni yakho yokugqibela ezimbalwa budlelwane nabanye ayiphumelelanga kwaye yintoni ungakwazi ukufunda ukusuka apho. Kuphuma apho kwaye uyakuthanda izinto ezenza kuwe ndonwabe. Kwaye kuba kanye bonwabele yokuba awutshatanga. Ndicinga ukuba siza ukuchitha kokukhona iintsuku watshata kwe siza omnye. ngoko ke, sibe nayo bonwabele nabo ngexesha sinako. Ngokomthetho dating guys nangona, ndiza kuthi kufuneka wazi ntoni iimpawu osikhangelayo kwi-a guy njengoko jikelele guideline. Andikho esithi a massive uluhlu kodwa ukucinga izinto zikakesare absolutely namnye negotiable. Ukuba indlela uyayazi into osikhangelayo kwaye bayakwazi ukuba umhla, kokukhona efanelekileyo abantu. Kanjalo ikuvumela ukuba kugxila ekubeni uhlobo umntu ukuba zakho zilungile mate izakuba attracted. Ngoko ke, umzekelo, ukuba ubufuna ukuba ube kunye umntu owaye loyal, nomonde kwaye uhlobo ke kuya kufuneka ukuba kugxila ekubeni okungakumbi ukuze ngokwakho.
Kulungile ndiya kuba umbuzo
akusebenzi ukuba ngenene na apho okanye into izakuba enxulumene kodwa ke kuba oku omkhulu, umhlobo, ngubani nje ngothando kunye nam, uyabathanda abantwana bam, ndinqwenela ukwenza nantoni na kum. Nguye ELIKHULU guy, umsebenzi olungileyo, funny, zalo lonke udidi, enkulu usapho umntu, sino enjalo ezilungileyo ixesha jikelele nganye enye, ebeya kuba olugqibeleleyo iqabane lakho, indima imodeli, kwaye umyeni KODWA nguye kancinci overweight, kwaye ndiza nje andiqinisekanga ukuba ndinako kuba sexually attracted kuye. Mna hate ukuba nkqu kuthi ukuba ngenxa yokuba ndifuna ukuva ukuba yayo unxweme kodwa makhe ubuso ke uninzi abafazi ufuna kuba ukuba utsalekoname phambi kokuba nantoni na. Mna kuba ebhalwe ezingachanekanga uhlobo umntu, bazalwana wonke ubomi, kuba abantwana ukusuka ezingachanekanga uhlobo umntu. Akunyanzelekanga ukuba ufuna ukuqhubeka ukuphila ubomi bam yedwa. Ndinguye ngoku w i-EUM kodwa uzama lokugqiba ntoni ukwenza. Andikho ujonge ukuba bangene a budlelwane ilungelo ngoku kunye umhlobo wam, kodwa ndiyazazi ukuba mna ngonaphakade babefuna kum ayikwazi. Mna nje ufuna ukwazi ukuba nabani na thinks ukuba uyakwazi kuba ngaphezulu attracted ukuba umntu ngenxa abo bamele ngokuhamba kwexesha. Ndithe nqa ukuba ixesha elide. kengoko get ukubona ngamnye ezinye kakhulu ngoko ke ndiya kwenza ummangaliso ukuba kube ngomhla yonke imihla qho ukuba izakuba ezahlukeneyo, kodwa hayi ngoko ke, kulungile. Ingaba yesitalato utsalekoname a yaba barker. enkosi, Enkosi, kuba umzekelo-icatshulwe kwi yakho hetalia oko kusenokuba nzima ukufumana phandle phaya kodwa intlanganiso abantu kwaye ukuphakanyiswa kokuya kwi imihla ingaba umsebenzi ekugqibeleni.
Omnye nje sele ukugcina uzama
← I-chongqing, China Apho Kuhlangana Girls Omnye Mans Ukuhamba
Isitshayina young umfazi: Ubomi Imikhuba uza Kuba Ukunika Phezulu kuba Ezinzima Budlelwane →